Dalabka safarka wuu soo noqday laakiin weli aad buu uga hooseeyaa heerarka ka hor COVID
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » Dalabka safarka wuu soo noqday laakiin weli aad buu uga hooseeyaa heerarka ka hor COVID
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Soo -kabashada socdaalka caalamiga ah waxay u baahan tahay dawlado si loo soo celiyo xorriyadda safarka - ugu yaraan, safrayaasha la tallaalay waa inaysan la kulmin xannibaadyo.
Baahida safarka hawada ee caalamiga ah iyo tan gudaha ayaa muujisay dardar aad u weyn bishii Luulyo 2021.
Xayiraadaha socdaalka ee ay dawladdu soo rogtay ayaa sii wada dib-u-dhaca ka-soo-kabashada suuqyada caalamiga ah.
Baahida guud ee gudaha ayaa hoos u dhacday 15.6% marka loo eego heerarkii qalalaasaha ka hor.
The Ururka Caalamiga ee Gaadiidka Cirka (IATA) wuxuu ku dhawaaqay in dalabka socdaalka hawada ee caalamiga ah iyo kan gudaha labadaba ay muujiyeen dardar aad u weyn bishii Luulyo 2021 marka la barbar dhigo Juun, laakiin dalabku aad buu uga hooseeyaa heerarkii hore ee COVID-19. Xayiraadaha safarka ee ballaaran oo ay dowladdu soo rogtay ayaa sii wada dib-u-dhiska suuqyada caalamiga ah.
Sababtoo ah isbarbardhigyada u dhexeeya 2021 iyo 2020 natiijooyinka billaha ah waxaa qalloociyay saamaynta aan caadiga ahayn ee COVID-19, haddii aan si kale loo xusin isbarbardhigga oo dhan waa Luulyo 2019, oo raacay qaab dalab caadi ah.
Dalabka guud ee safarka hawada bishii Luulyo 2021 (oo lagu cabiray kilomitirrada rakaabka ee dakhliga ama RPKs) ayaa hoos u dhacay 53.1% marka la barbar dhigo bishii Luulyo 2019. Tani waa horumar la taaban karo laga bilaabo Juun markii dalabku ahaa 60% ka hooseeya heerarka Juun 2019.
Dalabka rakaabka caalamiga ah bishii Luulyo wuxuu ka hooseeyay 73.6% bishii Luulyo 2019, isagoo hagaajiyay hoos u dhaca 80.9% ee la diiwaan geliyey Juun 2021 iyo laba sano ka hor. Dhammaan gobolladu waxay muujiyeen horumar waxayna shirkadaha diyaaradaha ee Waqooyiga Ameerika dhajiyeen hoos -u -dhaca ugu yar ee RPK -yada caalamiga ah (xogta taraafikada bisha Luulyo ee Afrika lama helin).
Wadarta dalabka gudaha ayaa hoos u dhacay 15.6% marka loo eego heerarkii hore ee qalalaasaha (Luulyo 2019), marka la barbardhigo hoos u dhaca 22.1% ee la diiwaan geliyey Juun intii ka dambaysay Juun 2019. Ruushku wuxuu dhajiyay natiijada ugu wanaagsan bil kale, iyadoo RPK-yadu kor u kaceen 28.9% iyo July 2019.
“Natiijooyinka Julaay waxay ka tarjumayaan rabitaanka dadka ee ah inay safraan inta lagu guda jiro xagaaga Waqooyiga Hemisphere. Gaadiidka gudaha ayaa dib ugu soo laabtay 85% heerarkii ka horreeyay xiisadda, laakiin dalabka caalamiga ah ayaa soo kabsaday kaliya in ka badan rubuc ka mid ah mugga 2019. Dhibaatadu waa tallaabooyinka xakamaynta xuduudaha. Go'aannada dowladda laguma wado xog, gaar ahaan marka la eego waxtarka tallaallada. Dadku waxay u safreen meeshii ay kari kareen, taasina waxay ugu horrayn ahayd suuqyada gudaha. Soo -kabashada socdaalka caalamiga ah waxay u baahan tahay dawlado si loo soo celiyo xorriyadda safarka. Ugu yaraan, socotada la tallaalay waa inaysan la kulmin xannibaadyo. Taasi waxay wax weyn ka tareysaa dib -u -xiridda adduunka iyo soo nooleynta waaxaha socdaalka iyo dalxiiska, ”ayuu yiri Willie Walsh, Agaasimaha Guud ee IATA.
Sidee Suite u tahay Sandals Luxury Resorts